Lo mcimbi esibi kakhulu ekuphileni - ngukufa. Ukufa - uyisiphetho bokuphila komuntu wasemhlabeni, kwalandela engaziwa, futhi lena engaziwa kuyabethusa amadoda. Ukuze ubone empilweni yangempela, njengoba umuntu ofayo, yebo umuntu ongaziwa Imininingwane - ke ukusinda kwalo mshophi, futhi ngenhlanhla, abantu musa ngokuvamile kufanele abhekane nalo. Ngakolunye uhlangothi, umbono ephusheni, ukufa impela isivakashi njalo futhi, njengoba ekuphileni kwangempela, lapha ke Nokho eshiya umuzwa omubi, Yebo, futhi incommensurable nge oqobo dleko.
Naphezu kweqiniso lokuthi ukufa bubonakala iphupho kubuhlungu ngempela, iphupho kwemfundiso yokuziphendukela ejwayelekile, konke kubukeka abasebenzela ephusheni, ukumela ukufa ezinhle. Cishe zonke izincwadi iphupho ethandwa Ukufa ephusheni esichazwa njengesono esiphambene njengesibonakaliso yokuphila isikhathi eside ngenjabulo. Ukuhunyushwa ezingabazekayo eziningana futhi ezingabalulekile. Empeleni, kubaluleke kakhulu e umongo walokho iphupho ngukufa.
Uma iphupho uyafa umuntu ongamazi nhlobo, futhi ukuyibuka sengathi kusukela ngaphandle, esimanjemanje iphupho nencazo ukufa uhumusha ezifana ukususa ezinye izimo zengqondo kanye eyeqisayo, ngobutjha emhlabeni. Le ndlela ikhombisa umbono yesimanje ku kwengqondo. Ingqondo enganakile ikwenza kucace indoda ukuthi uye washintsha, futhi abanye obuncane engqondweni yakhe yafa. Isihambi ukuthi kungenxa yokuthi ushintsho hhayi okungaka, futhi akuphazamisi ubuqotho "Mina" ngubani wabona iphupho. Ngenxa ubuthongo futhi ngeke siyekele unezinkumbulo ezingezinhle.
Lapho ubuhlungu ukubona ukufa kwakhe ephusheni. incwadi Dream ukunikeza incazelo ecacile ayinamandla. Inchazelo kunazo olunzulu lunikeziwe ncwadi iphupho lwamaGypsy uSeraphim, esitshela ukuthi ukufa kwakhe - kuwuphawu lokuthi umuntu ofela omunye wawo. Hhayi ezinye kancane ukuthula kwangaphakathi, futhi ephawulekayo. Ungase uthi ngisho ukuthi umuntu uguqulwa into entsha, futhi njenganoma yiluphi ushintsho, lokhu kushintsha kuyoba buhlungu kakhulu.
Akubona bonke abantu abake ukuze usinde ngokufa kwakhe ephusheni. Kodwa labo wadabula ke isikhathi eside bahlabeka umxhwele. Akusona inqubo ejwayelekile, amaphupho scary, lapho umuntu evuka ukwesaba, kodwa amaphupho, lapho Awakening okwenzeka sengathi ngomzuzwanyana befa. Akucaci ukuthi kungani enganakile eyobonisa impilo ende ifomu ubuhlungu ezifana kuchazwe sonnik ukufa elele. Nokho, kungenzeka ukuba avumelane yokuthi ukufa kungenzeka okuthile okwakhayo kuka elimazayo. Thanda i-phoenix, uvuka, umuntu eba omunye. Kuphakathi ayinqobile yakhe ukwesaba, noma yabo isitha noma yabo nalapho bebafushane khona.
Noma kunjalo, ungesabi ukuthi bashonelwe amaphupho emhlabeni, ngokushesha kuyodingeka babhekane ke emhlabeni wangempela. Isalukazi nge scythe unezinye mshini. Uma ubheka iphupho nencazelo, ukuchazwa kwamaphupho, futhi ukufa elizotholwa esikhathini womuntu eduze, it is ngobulili ngokuyinhloko ngokusebenzisa kwabaphansi. I esibi kunazo amaphupho, okuyinto isikhathi eside ushiye mkhondo inkumbulo yomuntu - iphupho kakade ongasekho othandekayo ubiza endaweni ethile ngemva kwakhe. Ephusheni, isimo ibonwa ukuba ejwayelekile, kodwa Awakening kuyoba nzima kakhulu futhi singathandeki.
Futhi, njengoba kuboniswa lwamaGypsy ncwadi uSeraphim iphupho, elimelela ukufa esibukweni eziphukile, amanga ngendlela ephambene neyemvelo sikelo, iwashi wayeka, kwesihenqo, njll Okungukuthi, konke iyisiginali sikhathi abantu isesikhathini. Chaza umbala omubi angalali nangokwengeziwe nomuzwa wokuthi kushiya. Uma ukufa iphupho ekhathazayo, amaphupho, elimelela ethukile wakhe futhi ezisongela kuthiwa. By the way, cishe wonke umuntu ezizwa ukufa kuyeza namaphupho izimpawu, kuyaqabukela ukhuluma ngawo nabanye. Ngakho-ke akufanele singasinaki besaba lokho ebona ukufa, futhi wesabe indlela azizwa ngayo bese hunches.